ဝန်ဆောင်မှုများ - Wuxi Fuzuan Machinery Technology Co., Ltd.
FUZUAN စက်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအား စဉ်ဆက်မပြတ် ထိရောက်ပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပံ့ပိုးမှုပေးသည်
FUZUAN ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာအဖွဲ့သည် နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်မချမီ သင့်အား အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဝန်ဆောင်မှုပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဲဒီအထဲမှာ၊
1. ပစ်မှတ်စျေးကွက်နှင့် ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ဖောက်သည်အား အသင့်တော်ဆုံးသော မှန်ပြုပြင်ရေးစက်များ၊ မော်တော်ကား tempered သို့မဟုတ် laminated line machines များကို ရွေးချယ်ပါ။
2. ကုန်ကြမ်းဖန်ပစ္စည်း၊ မှိုများ၊ ဂျစ်များ၊ မှန်ခလုတ်၊ ရော်ဘာ/EPDM လက်စွပ်၊ wiper ထိုင်ခုံချိတ်ဆက်မှု၊ talcum အမှုန့် စသည်တို့ကဲ့သို့သော မော်တော်ယာဥ်မှန်အကွက်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ကိရိယာတန်ဆာပလာများကို ရွေးချယ်ရာတွင် ကူညီပေးပါ။
3. အလုပ်ရုံရှိ မော်တော်ကားမှန်ပြုပြင်ရေးစက်များအားလုံးကို ဖောက်သည်အား ကူညီစီစဉ်ပေးပါ။
4. အခြားဖန်ထည်ပြုပြင်ရေးကုမ္ပဏီများထံ သွားရောက်လည်ပတ်ရန် စီစဉ်ပါ။
FUZUAN သည် သင့်အား ပြီးပြည့်စုံပြီး စနစ်ကျသော ရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ စက်ချွတ်ယွင်းမှုဖြစ်နိုင်ချေများကို လျှော့ချရန်နှင့် စက်ရပ်ချိန်ကို တိုစေရန်အတွက် ၎င်း၏နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုကို လျင်မြန်စွာ ပေးအပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဲဒီအထဲမှာ၊
2. စက်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် အင်္ဂလိပ်လက်စွဲ နှင့် ဗီဒီယို။
3. အာမခံကာလ 1 နှစ် (ဝတ်ဆင်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများမှလွဲ၍) တစ်သက်တာထိန်းသိမ်းခြင်း။
4. အဝေးထိန်းဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်၊ အမှားအယွင်းများကို ချက်ခြင်းဒေသခံအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပြီး ပစ်မှတ်ထားသောလုပ်ဆောင်ချက်များကို စတင်နိုင်သည်။
5. အီးမေးလ် သို့မဟုတ် Skype သို့မဟုတ် Whats အက်ပ်ဖြင့် 24 နာရီ နည်းပညာပံ့ပိုးမှု။
6. FUZUAN သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအား ပံ့ပိုးပေးထားသော ပစ္စည်းများ၏ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကို အာမခံရန်အတွက် အပိုပစ္စည်းများစာရင်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုချက်မှာ စာရင်းသွင်းထားသော အပိုပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူပြီး အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက် စတော့တွင်ထားရှိရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ယုံကြည်စိတ်ချရသော အပိုပစ္စည်းများ ဝန်ဆောင်မှုကိုပင် ပေးစွမ်းနိုင်သည်၊ တိကျသော တောင်းဆိုမှုအရ သုံးစွဲသူများထံ အပိုပစ္စည်းများကို ပေးဆောင်နိုင်သည်၊ မြန်ဆန်ပြီး အချိန်မှန် ပို့ဆောင်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထိပ်တန်းဦးစားပေးဖြစ်သည်။
FUZUAN Machinery မှ ပံ့ပိုးပေးသော စက်ပစ္စည်းအားလုံးကို တစ်သက်တာ ထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်ပြီး အခမဲ့ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှု ပေးမည်ဖြစ်သည်။
စက်ပစ္စည်းများကို တပ်ဆင်ပြီး အမှားရှာပြီးနောက်၊ လူမဟုတ်သော အကြောင်းရင်းများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော စက်ပစ္စည်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို အခမဲ့ အစားထိုး ပြုပြင်ပေးပါမည်။
ကုမ္ပဏီ၏ စက်ကိရိယာများ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများသည် အကောင်းမွန်ဆုံးသော စျေးနှုန်းဖြင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးသည် ၊ ဆိုလိုသည်မှာ ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ် + အလုပ်သမား ခရီးစရိတ်များ ဖြေရှင်းပေးခြင်း။
စက်ပစ္စည်းများ စက်ရုံမှ ထွက်ခွာသည့်အခါ အချို့သော ထိခိုက်လွယ်ပြီး စားသုံးနိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။